Yakanakisa ZirconiameteringNozzle (PMDQuality) Mugadziri uye Fekitori | FunMeet
Uchishandisa zircon, yakasanganisa PSZ mg uye yakasanganisa PSZ CA sezvinhu zvakagadzirwa uye Y2O3 sechiwedzera, zrsio4-zro2 tundish nozzle nehupamhi hwepamusoro yakagadziridzwa. Mhedzisiro ye particle gradation, kuumbwa kwekumanikidza uye Y2O3 yekuwedzera pane zvivakwa zrsio4-zro2 tundish nozzle yakadzidzwa, uye chikamu chakaongororwa neXRD, Iyo microstructure yakaongororwa neSEM uye EDS. mhedzisiro yekuyedza inoratidza kuti zvigadzirwa zvepamusorosoro zvinogona kuwanikwa nekusarudza zvinonzwisisika gradation uye kuumbwa kwekumanikidza. Y2O3 haigone kungoshanda sintering mumiriri wezirconium zvinhu, asi zvakare inosimudzira kuora kweZrSiO4.
PMD Series yeZro2 inoumba zvedongo tundish kamwene yekuisa
Mhedzisiro yekuyedza inoratidza kuti iyo PS yakavakirwa bhainda system ine simba riri nani, pamusoro uye nekutsetseka painosanganiswa pa125 ℃ kwemaminitsi gumi, uye isinganetseke kutembiricha, iyo inokodzera jekiseni zvedongo. Pamusoro peiyi hwaro, hupfu hunotakura hunowedzerwa ne86%, Kuti udzikise hurema mune yekupedzisira degreasing uye sintering maitiro. Isa chikafu chakasanganiswa muffire yevira yekudzora, dzidza kudzikira kwekushisa kwechikamu chimwe nechimwe chebinder naTG, uye gadzira iyo curreasing curve yakakodzera ino sisitimu. Wobva wapisa pakasiyana tembiricha, Iyo yekudzora uye yekumhanyisa nzvimbo yakaonekwa neTEM. Iko kristaro chikamu chinoshanduka che zirconia ceramics chakaongororwa neXRD. Iwo epamhepo michina zirconia ceramics pakasiyana tembiricha akafunda. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti macomputer akaumbwa sintered pa1550 ℃ ane zvivakwa zviri nani. Iwo macomputer maceramics akaumbwa nealumumina uye zirconia ine zvakasiyana zvirimo zvakasarudzika kuitira kudzora uye sintering. Maumbirwo uye zvivakwa zveakaumbwa maceramics akafundwa neXRD neTEM, Uye inogona kudzikisira mutengo wezvigadzirwa.
Pamusoro pe PMO1 akateedzana eZro2 macomputer ceramic zvigadzirwa, kuburikidza nekuenderera mberi kwakakosha tekinoroji yekugadzirisa, Fangming Nyowani Zvinyorwa zvakabudirira R & D, yakaburitsa PMD nhevedzano yepamusoro yekuita Zro2 inoumba zvedongo tundish kamwene inoisa. Ivo vane kuchena kwakakwirira, kusimba kupwanya, kukukurwa kwevhu, kupisa kwekushisa kunodzivirira, hupenyu hwakareba hwekushanda. Hupenyu hwavo hwekufunga hunosimudzwa ne30-50% zvichibva pa PMO1 nhevedzano yezvigadzirwa panguva imwechete yekushanda.
Pashure: Zirconia metering Nozzle (PMO1 Hunhu）
Zvadaro: ZirconiaSlidePlate, Mhete (PM01Quality)
Zirconia Yemukati Nozzle
Zirconia Metering kamwene
Zirconia Rokunze kamwene
Zirconium Tundish kamwene